Shirkii Gollaha Wasiirada Federaalka oo Amniga Xooga Lagu Saaray[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirkii Gollaha Wasiirada Federaalka oo Amniga Xooga Lagu Saaray[Sawirro]
Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulankoodii caadiga ahaa, waxaana shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte, iyadoo kulanka ay goob joog ahaayeen Taliyeyaasha Ciidamadda. Waxana shirka looga hadlay qodobo dhowr ah.
Golaha Wasiiradda ayaa ugu horeyntii waxay warbixinta amniga ka dhageysteen Wasiirka Amniga, waxana sidoo kale golaha warbixin siiyey Taliyaha Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay waxqabadka Ciidanka Booliska, caqabadaha horyaalla, hiigsigooda iyo howlaha muhiimka ah ee mudnaanta u leh. Golaha Wasiirada ayaana boggaadiyay dadaalka Saraakiisha ciidamada ammaanka ee lagu sugayo amniga guud ee dalka.
“Xukuumadda waxay xoogga saaraysaa in dalka laga xoreeyo cadowga isla markaana la sugo ammaanka, howlgaladii u dambeeyay ee Ciidamaddu Amnigu ka sameeyeen Muqdisho waxaa looga guuleystay burburinta goobo cadowgu iska soo abaabuli jiray. Tanani waxay marqaati u tahay gacanta aan ka helnay Shacabkeena Soomaaliyeed” ayuu yiri R.W Carte.
Shirka Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale waxaa looga dooday soo gudbinta Wasaaradda Caddaaladda ay soo gudbisay magacyada labada xubnood ee musharaxiinta Golaha Adeegga Garsoorka, waxana dood kadib wadajir u ansixiyay Golaha Wasiirada.
Sidoo kale Wasiiru Dawlaha Bii’ada Mudane Burci Maxamed Xamza ayaa Golaha talo usoo jeediyey mamnuucidda in dalka lasoo geliyo bacaha lagu adeegto kuwaasoo dhib weyn ku haya bii’ada, bulshada iyo bilicda magaalooyinka dalkana ay wax u dhimayso, wuxuuna kaloo wasiiru dowluhu sharaxay dhibaatooyinka wasaqda elektroonigga iyo sida ugu haboon oo loo maarayn karo wasakhda noocyadeeda kala duwan, ha-noqoto tan Isbitaalada ama Elektroonigga. Sharcigan haddii la ansixiyo wuxuu door ka qaadan doono sidii dalka looga ciribtiri lahaa isticmaalka bacaha oo dhibaatooyin kala duwan leh.
Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane C/raxmaan Caynte ayaa isaguna ka hadlay Hanaanka samaynta Qorshe Qaran, wuxuuna soo gudbiyey habraaca sameynta qorshe qaran sanadka 2017 – 2019. isagoo sheegay in dalku uu galayo waji horumarin sidaas daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in dalku yeesho Qorshe Qaran oo haga horumarinta dalka.